အောကျတိုဘာ 6, 2019 – Healthy Life Journal
လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ပေါက်တတ်သည့် အဖုအကျိတ်များ
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အဖုအကျိတ်တွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ. လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆဲလ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဆဲလ်တွေက တစ်နေရာမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ ပမာဏထက် ပွားလာတယ်ဆိုရင် တစ်သျှူးလို့ခေါ်တဲ့ အစိုင်အခဲဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမယ်၊...
၊ ဇွန် ၊ ဆီးအိတ်ကနေ ဆီးတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိမ့်ထွက်မှုဖြစ်တာကို ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဆီးမထိန်းနိုင်တာက အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးမှာပါဖြစ်တတ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေက ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ တချို့သော အခြေအနေတွေမှာ အမျိုးသမီးအများစုက ဆီးအနည်းငယ်မထိန်းနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆီး မထိန်းနိုင်တာကြောင့် လူကြားထဲသွားရမှာကို...